तोडिएला ६ क्लबको पकड ?- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
तोडिएला ६ क्लबको पकड ?
श्रावण १८, २०७६ बीबीसी
लन्डन — पछिल्लो तीन सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष ६ मा आर्सनल, चेल्सी, लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनहमले पकड राखेका छन् । यसमध्ये नयाँ सिजन अगाडि केही टिम भने संकटमा छन् वा क्लबभित्र केही न केही समस्या छ । यस्तोमा सन् २०१९–२०२० को सिजन यी ६ क्लबको प्रभुत्वमा कोही नयाँले धावा बोल्न सक्नेछ त ? यसपल्ट यी ठूला ६ क्लबलाई छुन सक्ने कुनै क्लब होलान् त ?
यी ६ क्लबमध्ये सम्भवतः म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल केही बढी बलिया नै देखिन्छन् । बाँकी चार स्थानका लागि भने पक्कै पनि राम्रो भिडन्त हुने देखिन्छ । यसमध्ये सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ लेस्टर सिटी । गत सिजन यो क्लब नवौं स्थानमा थियो । तीन वर्षअघि भने यो क्लबले शीर्ष ६ टिमको स्थानमा प्रवेशमात्र गरेन, अविश्वसनीय रूपमा लिग नै जितेर देखायो । यसपल्ट लेस्टर सबैभन्दा रोमाञ्चक युवा टिम हुनेछ ।
ब्रेन्डन रोजर्सको टिममा २६ वर्षमुनिका अधिकांश खेलाडीको बाहुल्य छ । यी खेलाडीमध्ये अधिकांस आफ्नो खेलजीवनको उत्कृष्ट विन्दुमा पुग्न बाँकी छन् । गत सिजन न्युकासल युनाइटेडका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने आयोज पेरेज हालै लेस्टर आएका छन् । यस्तै योरी टिलेमन्स पनि कीर्तिमान ४० मिलियन पाउन्डमा लेस्टरमा आइसकेका छन् । पछिल्लो सिजनको १० खेलमा रोजर्स नै प्रशिक्षक थिए र त्यसक्रममा टिमको प्रदर्शन अविश्वसनीय रूपमा राम्रो थियो ।
गत सिजन सातौं स्थानमा आएको वोल्भसलाई प्रिमियर लिगको रोबिन हुड क्लब पनि भन्न थालिएको छ । यसपल्ट विश्वास गरिएको छ, सायद टिमको प्रदर्शन अझ राम्रो हुनेछ । गत सिजन म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुललाई छाडेर अरू शीर्ष ६ स्थानमा रहेका टिमविरुद्ध वोल्भसको प्रदर्शन अद्वितीय थियो । तर यही टिमले अंकतालिकाको पुछारमा रहेको टिमविरुद्ध भने अंक गुमायो । बलियाबाट अंक छिन्दै कमजोरलाई अंक दिने हुँदा नै वोल्भसलाई रोबिन हुड टिम भनिएको थियो ।
यसपल्ट वोल्भ्सले माथिल्लो क्लबबारे राम्रो प्रदर्शनको क्रम कायम राख्ने र पुछारका क्लबविरुद्ध राम्रो गर्ने हो भने टिम शीर्ष ६ भित्र पर्ने राम्रो उम्मेदवार हुनसक्छ । शीर्ष ६ स्थानका लागि बलियो प्रत्याशी रहेको अर्को क्लब हुनसक्छ एभरटन । गत सिजन यो आठौं स्थानमा थियो । गत सिजनका अन्तिम आठ खेलमा उसले चेल्सी, आर्सनल र म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराएको थियो । खासमा एभरटनको प्रदर्शन गत सिजनको मध्यभागबाट राम्रो भएको सबैले अनुभव गरेका छन् ।
क्लबको सफलतामा धेरैभन्दा धेरै भूमिका प्रशिक्षक मार्को सिल्भाकै रहेको मानिन्छ । उनले यसपल्ट लोनमा रहेका आन्द्रे गोमेजको अनुबन्धलाई स्थायीमा परिणत गरिसकेका छन् । यसपल्ट सिल्भाले जस्तो टिम चाहिएको छ, त्यस्तो के भनेको छ त ? यसबारे भने स्पष्ट उत्तर दिन सकिन्न । तर उसले पछिल्लो सिजनको अन्त्यतिर जस्तो लय समातेको थियो, त्यसलाई यसपल्ट दोहोर्‍याउने हो वा त्यसको छेउछाउ मात्र प्रदर्शन गर्ने हो भने त्यो गज्जब हुन सक्नेछ ।
– क्रिस कोलिन्सन प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ ०७:३६
गौरीटारमा मुख्यमन्त्री र सदस्यसचिव
मकवानपुर — नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको हेटौंडा–६ स्थित केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान (गौरीटार एकेडेमी) लाई प्रत्येक वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले गौरीटार एकेडेमीको शुक्रवार स्थलगत अवलोकन गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यकअनुसार बजेट विनियोजन गर्दै बहुवर्षीय योजनाको रूपमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
हाल प्रदेश सरकारको गौरीटारमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी फुटबल मैदान र एथलेटिक्सको ट्र्याक एन्ड फिल्ड निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारको लगानीमा गौरीटारमा ४ करोड लागतको ३६ कोठे ब्वाइज होस्टल तयार भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएको उक्त होस्टल ६० जना क्षमताको छ । ‘होस्टल तयार भयो, अब खेलाडीलाई दैनिक प्रशिक्षण गर्ने कभर्डहल पनि निर्माण सुरु भइसकेको छ,’ सदस्यसचिव सिलवालले कभर्डहल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र उक्त सम्पन्न भएसँगै आवश्यकताअनुसार विभिन्न खेलकुदका बन्द प्रशिक्षण हेटौंडामा राखिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हेटौंडा प्रदेशको राजधानी हो । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर हामी प्रत्येक वर्ष आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार थप्दै जानेछौं,’ सदस्यसचिवले प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले मास्टर प्लानअनुसार प्रत्येक वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजान सबै तहको सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको खण्डमा सम्भव भएको बताउँदै त्यसका लागि खेलकुद मन्त्रालयसँग थप छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गौरीटार केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहे पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी हामी प्रबन्ध मिलाउँछौं । यहाँभित्र हुने विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अब बजेटको अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।
हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नाममा रहेको २३ विघा जग्गामा कम्पाउन्ड घेर्ने र रंग लगाउने कार्यमा २ करोड रुपैयाँ र ब्वाइज होस्टल निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक संरचना तयार भएको छ ।
'साग तोकिएकै समयमा हुन्छ’
सदस्यसचिव सिलवालले तोकिएकै मितिमा नेपालमा १३ औं साग हुने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा काठमाडौंमा मंसिर १५ देखि २४ सम्म हुने भनिएको साग प्रतियोगिता सर्ने चर्चा भइरहेको अवस्थामा सदस्यसचिवबाट यस्तो दाबी आएको हो ।
हेटौंडामा शुक्रबार मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले गरेको स्वागत कार्यक्रममा सिलवालले सागका लागि नेपालमा तीव्र रूपमा कार्य सुरु भइसकेको र कात्तिक १५ सम्म सबै काम पूरा भइसक्ने दाबी गरे ।
सदस्यसचिव सिलवालले सन् १९९९ पछि नेपालले आयोजना गर्न लागेको सागलाई नेपालकै गौरवको रूपमा सफल बनाएर देखाउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए । ‘करिब २० वर्षपछि नेपालमा हुन लागेको साग सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ ०७:३४